Ciyaartoy Barcelona Ka Tirsan Oo Iska Diiday In Uu Fasaxa Ka Soo Laabto Ka Hor Kulanka Champions League Ee Napoli. - Gool24.Net
Ciyaartoy Barcelona Ka Tirsan Oo Iska Diiday In Uu Fasaxa Ka Soo Laabto Ka Hor Kulanka Champions League Ee Napoli.
Xaalada kooxda Barcelona ayaa la kulantay xaalad kale oo murugo leh kadib markii uu xidig ka tirsan kooxdeedu uu iska diiday in uu ka soo laabto fasixii yaraa ee laga siiyay horyaalka La Liga wuxuuna xidigani diiday in uu qayb ka nodo diyaar garowga Champions League ee kulanka Napoli.
Barcelona ayaa seegtay difaacashada koobka horyaalka La Liga waxayna koobka u lumiyeen kooxda ay xifiltamaan ee Real Madrid laakiin waxay isha ku hayaan kulanka lugta labaad ee wareega 16ka Champions League ee Napoli.
Laakiin war soo baxay ayaa sheegaya in Arthur Melo uu iska diiday in uu kooxdiisa Barcelona ku soo laabto kadib markii dhawaan laga iibiyay kooxda Juventus balse waxaa heshiiskiisa ku jira in uu Barca xili ciyaareedka la dhamaysto.
Barcelona ayaa hadda qaadaysa talaabo sharci ah oo ay ku ciqaabayso xidiga reer Brazil ee Arthur Melo kaas oo lagu ganaaxayo in uu jabiyay heshiiskii uu kooxda kula jiray ee uu xili ciyaareedka ugula dhamaysan lahaa Champions league.
Laakiin Arthur Melo oo lagu qasbay in uu Juventus ku biiro ayaan doonayn in uu kooxda sii matalo maadaama oo uu niyadjab wayn ka qaaday qaabkii lama filaanka ahaa ee loogu riixay in uu Camp Nou ka baxo.
Wargayska Diario Sport ayaa hadda shaaciyay in Arthur uu cadaystay in aanu ku soo laabanayn kooxda Barcelona sidaana uu ugu wareegi doono kooxdii laga iibiyay ee Juventus.
Waxaana warkan lagu sheegay in Barcelona ay xidiga reer Brazil ku qaadayso dacwad ah in uu jabiyay heshiiskii uu kooxda kula jiray taas oo sii kordhin doonta khilaafkii badnaa ee xili ciyaareedkan soo hadheeyay kooxda Camp Nou kadhisan.
Barcelona ayaa gacamo madhan xili ciyaareedkan ku dhamaysan doonta haddii ay ku fashilmaan in ay ku guulaystaan koobka Champions league balse calaamadaha muuqda ayaa muujinaya in Barca ay noqotay koox burburtay oo uu Bartomeu garan laayahay wixii uu samayn lahaa.
Marka la eego qaabkii uu maamulka Bartomeu ula dhaqmay Arthur Melo oo hore si cad ugu sheegay in uu kooxda sii joogi lahaa ayaa muujinaysa in xidiga reer Brazil uu niyadjab wayn ka qaatay sabab la’aanta kooxda banaanka looga saaray taas oo keenaysa in uu qaato halista in uu lumiyo qayb ka mid ah lacagtii uu Barca mushaar ahaan uga qaadan lahaa.
Tababare Quique Setien oo ay markii horeba xaaladu ku xumayd ayay suurtogal tahay in aanu heli doonin adeega Arthur Melo waxayna Barca galaysaa xaalad kale oo hubanti la’aan ah.
Si kastaba ha ahaate, Barcelona ayaan wali wax war ah ka soo saarin go’aanka uu Arthur Melo ku gaadhay in aanu ku soo laaban kooxda ka hor kulanka Napoli, waxaana la sugayaa haddii saacadaha soo socda ay maamulka Camp Nou war soo saari doonaan.